Bit By Bit - ဆိုင်ရာကိုယ်ကျင့်တရား - 6.6.3 သီးသန့်လုံခြုံရေး
သုတေသီများရုန်းကန်စေခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကတတိယဧရိယာ privacy ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ် Lowrance (2012) အတော်လေး succinctly ကတင်: "။ လူလေးစားခံရသင့်တဲ့အတွက်ကြောင့် privacy ကိုလေးစားသင့်ပါတယ်" သီးသန့်လုံခြုံရေး, သို့သော်, နာမည်ဆိုးရှုပ်ထွေးအယူအဆဖြစ်ပါတယ် (Nissenbaum 2010, Ch. 4) , နှင့်ကြိုးစားနေရသောအခါကဲ့သို့သော, ကသုံးစွဲဖို့ခက်ခဲသည် သုတေသနနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်။
privacy ကိုစဉ်းစားရန်တစ်ဘုံလမ်းတစ် public / private dichotomy နှငျ့အတူရှိ၏။ သတင်းအချက်အလက်လူသိရှင်ကြားလက်လှမ်းလျှင်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤစကားမစပ်, အဲဒီနောက်လူရဲ့ privacy ကိုချိုးဖောက် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမရှိဘဲသုတေသီများကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဤချဉ်းကပ်မှုပြဿနာတွေသို့ run နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုဝင်ဘာလ 2007 ခုနှစ် Costa Panagopoulos သုံးမြို့များတွင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လာမည့်အကြောင်းကိုစာတစ်စောင်လူတိုင်းကိုစေလွှတ်။ , နှစ်ဦးမြို့များ-Monticello, အိုင်အိုဝါနှင့်ဟော်လန်ခုနှစ်, မစ်ရှီဂန်-Panagopoulos / သတင်းစာအတွက်မဲပေးခဲ့သူတွေကိုများစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ကတိပြုခဲ့သည်။ အခြားတစ်မြို့-Ely ခုနှစ်တွင် Iowa-Panagopoulos / သတင်းစာအတွက်မဲပေးမခဲ့တဲ့လူစာရင်းကိုထုတ်ပြန်ဖို့ခြိမ်းခြောက်ကတိပြုခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကုသမှုမာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြ (Panagopoulos 2010) ကဤစိတ်ခံစားမှုအစောပိုင်းကလေ့လာမှုများအတွက်မဲပေးသူ impact တွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်, (Gerber, Green, and Larimer 2008) ။ ဆန္ဒမဲပေးရပြီးသူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူထုသည်မထားဘူးသောသူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များ; မည်သူမဆိုကဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းကဒီမဲပေးသတင်းအချက်အလက်ပြီးသားအများပြည်သူသောကွောငျ့ကြောင်းငြင်းခုန်တယ်ဒါကြောင့်, ထိုသုတေသနပညာရှင်ကသတင်းစာထဲမှာထုတ်ဝြေခင်းနှင့်အတူပြဿနာမရှိပါဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထိုအငြင်းအခုံအကြောင်းတစ်ခုခုများစွာသောလူမှားခံစားရ၏။
ဒီဥပမာသရုပ်ဖော်သကဲ့သို့, public / private dichotomy လွန်းတုံးဖြစ်ပါတယ် (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) ။ privacy ကိုစဉ်းစားရန်တစ်ဦးကပိုကောင်းလမ်း, အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ကြီးပြင်းပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတယောက်, contextual သမာဓိ၏စိတ်ကူးသည် (Nissenbaum 2010) ။ အဲဒီအစားသတင်းအချက်အလက်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကစဉ်းစားခြင်းထက်, contextual သမာဓိသတင်းအချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, များစွာသောလူသူတို့၏ဆရာဝန်အခြားဆရာဝန်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးကိုမှတ်တမ်းများ shared လျှင် unbothered လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီအားဤတူညီသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရောင်းချလျှင်မပျော်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အညီ Nissenbaum (2010) , "privacy ကိုတစ်ပိုင်ခွင့် secrecy တစ်ပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဦးလက်ျာဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏သင့်လျော်သောစီးဆင်းမှုတစ်ဦးလက်ျာလည်းမဖြစ်၏။ "
contextual သမာဓိအခြေခံသော့ချက်အယူအဆ context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းသည် (Nissenbaum 2010) ။ ဤရွေ့ကားတိကျတဲ့ setting တွင်သတင်းအချက်အလက်များ၏စီးဆင်းမှုအုပ်ချုပ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့သုံးယောက် parameters တွေကိုကဆုံးဖြတ်ကြသည်:
သရုပ်ဆောင်တွေ (ဘာသာရပ်, ပေးပို့သူ, လက်ခံမဲ့သူကို)
Attribute တွေ (အချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများ)
တစ်သုတေသီအဖြစ်သင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဒေတာသုံးစွဲဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ကြသောအခါထို့ကွောငျ့မေးမြန်းဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်, "ဒီအသုံး context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းကိုခြိုးဖောကျပါသလား?" Panagopoulos ၏ဖြစ်ရပ်မှပြန်ရောက် (2010) , ဤကိစ္စတွင်အတွက်တစ်ဦးအပြင်ဘက်ရှိခြင်း သုတေသီသတင်းစာအတွက်မဲဆန္ဒရှင်သို့မဟုတ် Non-မဲဆန္ဒရှင်များ၏စာရင်းများကိုထုတ်ဝေရန်အချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းကိုခြိုးဖောကျဖွယ်ရှိပုံရသည်။ ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲအရာရှိတွေကသူ့ကိုမှအက္ခရာများကိုခြေရာခံနှင့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ခဲ့သောသူ၏ဖျောင်းဖျသောကွောငျ့တကယ်တော့ Panagopoulos ဂတိတော် / ခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်တဆင့်နောက်သို့မလိုက်ခဲ့ (Issenberg 2012, 307) ။
အခြား setting များမှာတော့, သို့သော်, context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားနည်းနည်းပိုပြီးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယ့် 2014 ခုနှစ်မှာအနောက်အာဖရိကမှာအီဘိုလာရောဂါ, ငါသည်ဤအခန်းကိုမိတ်ဆက်တှငျဆှေးနှေးတဲ့အမှုကာလအတွင်း mobility ကိုခြေရာခံရန်မိုဘိုင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများကို အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ခြေထံသို့ပြန်လာကြကုန်အံ့ (Wesolowski et al. 2014) ။ ဒီ setting ထဲမှာကျနော်တို့နှစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများစိတ်ကူးနိုင်သည်
အခွအေနေ 1: ပြီးပြည့်စုံခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းဒေတာပေးပို့ခြင်း [ဂုဏျရညျ]; မပြည့်စုံတရားဝင်မှု [သရုပ်ဆောင်တွေ] ၏အစိုးရများကရန်, မဆိုဖြစ်နိုင်သောအနာဂတျအတှကျ [ထုတ်လွှင့်အခြေခံမူ] ကိုသုံး
အခွအေနေ 2: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမည်ဝှက်မှတ်တမ်းများ [ဂုဏျရညျ] ပေးပို့ခြင်း, လေးစားတက္ကသိုလ်သုတေသီများ [သရုပ်ဆောင်တွေ] ရန်, တက္ကသိုလ်ကျင့်ဝတ်ပျဉ်ပြား၏ကြီးကြပ်မှု [ထုတ်လွှင့်အခြေခံမူ] မှအီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားနှင့်ဘာသာရပ်မှတုန့်ပြန်အတွက်အသုံးပြုရန်
ဤအခွအေနမြေား၏နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒေတာကုမ္ပဏီအထဲကစီးဆင်းကြသည် ဟူ. ခေါ်သော်လည်း, ထိုနှစ်ခုအခြေအနေများကိုရည်မှတ်ပြန်ကြားရေးစံချိန်စံညွှန်းသောကွောငျ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တွေ, attributes နဲ့ထုတ်လွှင့်အခြေခံမူများအကြားခြားနားချက်များ၏တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအ parameters မ​​ျားကိုတစ်ဦးတည်းသာအာရုံစိုက်အလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ တကယ်တော့ Nissenbaum (2015) ဤသုံးပါး parameters တွေကိုအဘယ်သူမျှအခြားသူများအားလျှော့ချနိုင်အလေးပေး, မသူတို့ကိုတစုံတယောက်သောသူသည်တစ်ဦးချင်းစီအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်အားထုတ်မှု-ကြောင်း attribute တွေသို့မဟုတ်ဂီယာတစ်ခုခုကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြ privacy ကို၏ဘုံ-သဘောအယူအဆတွေဖမ်းယူမှာထိရောက်မှုဖြစ်အခြေခံမူ-ကြပြီဘာကြောင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ, ဤသုံး-ရှုထောင်သဘာဝကရှင်းပြသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလမ်းပြ context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများစိတ်ကူးသုံးပြီးနှင့်အတူတစျခုမှာစိန်ခေါ်မှုသုတေသီများရှေ့ဆက်အချိန်သူတို့မသိစေခြင်းငှါဖြစ်ပြီးသူတို့တိုင်းတာရန်အလွန်ခက်ခဲ (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) ။ ထို့ပြင်အချို့သောသုတေသနများအလိုအလြောကျသုတေသနဖြစ်ပျက်မသင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါကြောင်း contextual-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းကိုခြိုးဖောကျမယ်လို့တောင်မဆိုနိုင်ပါ။ တကယ်တော့၏အခန်း 8 Nissenbaum (2010) အကြောင်းကိုလုံးဝဖြစ်ပါတယ် "ကောင်းမွန်သောအဘို့အ Breaking စည်းကမ်းများ။ " ဤပြဿနာများရှိနေသော်လည်း context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနေဆဲ privacy ကိုမှဆက်စပ်မေးခွန်းများကိုအကြောင်းကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ရန်အလွန်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ privacy ကိုငါ Persons နှင့်ကောင်းတဲ့ဦးစားပေးသောသူတို့အဘို့ကိုလေးစားဦးစားပေးသူအသုတေသီများအကြားအများအပြားနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းမြင်ရပါတယ်ဘယ်မှာဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကိုနားလည်နေတဲ့ဝတ္ထုကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်ဖို့အဓိကသော့ချက်သောကွောငျ့လျှို့ဝှက်စွာရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကိုယူပြီးလူကိုချောင်းမြောင်းသူတစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသုတေသနပညာရှင်၏ဖြစ်ရပ်ဆိုပါစို့။ ကောင်းတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သုတေသီများကဤသုတေသနပြုမှလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ်လို့နှင့်ပင်သုတေသီထောက်လှမ်းမပါဘဲသူမ၏ထောက်လှမ်းရေးတတ်လျှင်သင်တန်းသားများဘေးမရှိကြောင်းငြင်းပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစားဦးစားပေးသူကိုသုတေသီများသုတေသီရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူလူကုသမနှင့်တကယ်တော့သူတို့ privacy ကိုချိုးဖောက်သဖြင့်ထိခိုက်မှုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မယ်။ (ဒီအမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေပဲခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ပေမယ့်) ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကိုများ၏ကွဲလွဲအမြင်များကိုဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။
သရုပ်ဆောင်တွေ (ဘာသာရပ်, ပေးပို့သူ, လက်ခံမဲ့သူ), ဂုဏျရညျ: privacy ကိုအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုကြသောအခါနိဂုံးအတွက်, ကအလွန်အမင်းရိုးရှင်းတဲ့ public / private dichotomy ကျော်လွန်. ရွှေ့ဖို့နဲ့သုံးဒြပ်စင်ကိုတက်၏ဖန်ဆင်းထားတဲ့ context-ဆွေမျိုးအချက်အလက်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းခန့်အစားကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပါသည် (အချက်အလက်များ၏အမျိုးအစားများ) နှင့်ထုတ်လွှင့်အခြေခံမူ (သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းရာအောက်မှာန့်အသတ်) (Nissenbaum 2010) ။ အခြားသုတေသီများနှင့်သူ့ဟာသူတစ်ဦးထိခိုက်မှုအဖြစ်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏ချိုးဖောက်မှုကြည့်ရှုသော်လည်းတချို့ကသုတေသီများ, privacy ကို၏ချိုးဖောက်မှုကနေရလဒ်နိုင်ကြောင်းထိခိုက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ privacy ကိုအကဲဖြတ်ရန်။ များစွာသောဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှု၏အယူအဆတွေအချိန်ကျော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြသည်ကြောင့်, လူတစ်ဦးမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားနှင့်အခွအေနေကနေအခြေအနေအမျိုးမျိုးကွဲပြား (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , privacy ကိုအချို့သုတေသီများသည်အခက်ခဲကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များတစ်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် အချိန်။